UTOM UYALINDA: U-ALICE / IGAZI LEMALI ELIPHONONONGIWEYO - IINDABA
Ubuninzi beengcibi zomthi ezigcina ziyinyani zanele ukwenza ukuba umntwana afune ukuya kwindawo yokuhlala encediswayo ...
Ubuninzi bezinto ezenziwa ngabadala be-tunes eziyigcina ziyinyani zanele ukwenza ukuba umntwana afune ukufudukela kwindawo yokuhlala ehlala eFlorida, afumane umdlalo wakhe wokuzonwabisa, kwaye eme emva komnyango wekhusi ekhadini elikhwaza esithi, 'Yibhola yam yebhola ngoku!' Makhe sijonge ukufundwa kwangoku kwe-oldometer:
IBadass: UBob Dylan, uTom Uyalinda, uJohnny Cash, uElvis Costello
Ukanti Uhlobo Lobumnene Besiqingatha-Sokuphola, Ngendlela: UDavid Bowie, uLou Reed, u-Iggy Pop, uNeil Omncinci, uRobert Pollard, uJagger / Richards
Kutheni, Kutheni uye wadibana noRob Thomas kunye neKid Rock?: UWillie Nelson
I-Hack / Dork: UPaul McCartney
UMcCartney uphantse walinikezela ngesandla ibhetshi iyonke. Ukuba kuphela u-Tom Waits ebenikwe isihlalo kunye nemakrofoni ecaleni kwazo zonke ii-anchor ze-painkiller kunye ne-vitamin-goofy ex-jock kwi-Super Bowl halftime show, ii-Waits bezinokuphendula kuMcCartney's 'bekungayi kuba kuhle ukuba, kwezi ngexesha lokuthand 'izwe, amaPatriot aphumelele?' blather ngokubhomboloza-- njengoko esenza kwenye yeealbhamu zakhe ezimbini- 'Ngubani onika uthixo olungileyo?!' Ngapha koko, iipleyiti ezintsha zokulinda zilungiselela ukuphindwaphindwa 'kwiNkululeko,' ukuzama kukaMcCartney kwilinge lokugqibela lokuchaza umhobe: 'Usizi NguMlambo Wehlabathi,' 'Yonke Into Iya Esihogweni,' kwaye Bonke abahlanya apha. '
UTom Waits ebesenga ingcinga ye-ramshackle apocalyptic carnival isithuba seminyaka engamashumi amabini ngoku, evakalisa ukulangazelela i-otherworldly nostalgia kunye nokuzixakekisa ngee-freaks ezidlula esihogweni siphuma eHarmony Korine. Ngama-80s- xa yonke into yayilinganiswa 'ngee-oodles' kunye noqikelelo aluzange lubandakanye i-30% yamathuba obugrogrisi- Ukulinda wazisindisa kwindima yakhe njengelounge slouver ekrelekrele ngokuhamba qatha malunga nexesha awayezibethela ngalo UKathleen Brennan, onefuthe lakhe eliye lakhula ngokukhutshwa ngakunye (wabhala-kunye kwaye wavelisa zombini ii-albhamu ezintsha). Emva phayaa, abalandeli beLindi elidala bakhala 'Yoko!' kodwa masijongane nayo: loo nto yentsimbi yasebarroom yayiba ntle ngesiqingatha sentliziyo. Kunzima ukungayiva ingoma entsha ethi 'iConey Island Baby' njenge-ode eya eBrennan, indawo yokugcina izinto ezinjenge-psycho-circus: 'Ubusuku ngabunye uyeza / Ukundikhupha ndiye e-Dreamland.'
Zombini ii-discs ezintsha ze-Waits 'zezazo ii-albhamu, kwaye zombini ziingqokelela yeengoma ezigulayo zaseJamani ezibangelwa kukusebenzisana kwezobugcisa baphesheya noRobert Wilson (indoda eyayidume ngokubeka uPhilip Glass' Einstein elunxwemeni , kunye nooLinda benza nabo Umkhweli oMnyama ). Zombini izifundo zealbhamu ziintloko-ifolishi: UAlice ijongana ne (ahem) (isikhohlela) somnqweno wokuzalwa (kubikwa ukuba kusekelwe kuLewis Carroll kunye nentombazana encinci edumileyo eyayiza kuyicofa isandla ngexesha lokuhamba kwabo), ngelixa Imali yegazi (ibhalelwe ukukhapha umdlalo Woycek ) iingozi kummandla we-psychopharmacology ngokusebenzisa umxholo wexesha elidala lonyango. Ukulinda kwenza ingxelo yakhe ye-woebegone malunga ne-muck yobomi banamhlanje ngobugcisa nangokufanisa, ukuthintela ingqumbo enkulu yokuba ii-sophistos zokuzonwabisa ziya kuthi ziyadinisa.
Ezi albhamu zisebenza kwi-discography ye-Waits ngendlela yefilimu Indoda ebengekho ingena kwi-Oeuvre yeCoen: zizizihombiso zabo, zizele kukuphinda utyelele kwakhona, okuthe tye kunokuba kuhambele phambili. Exotica Swordfishtrombones , ukubaliswa kwamabali eArch Izinja zemvula , kunye nezinto ezingcono ze-hit-and-miss Umahluko weMule Zifezekiswe ngokupheleleyo apha, zigcinelwe imizuzu engama-91 yokuhambisa ngokudibeneyo i-waltzes kunye nematshi. Ngamaxesha athile, ulindile ade atshise ipiyano kancinci ukusuka 'kwi-Innocent Xa Uphupha' nge-winking brio ehlebezayo, 'Ngaba andonwabanga?' Imali yegazi 's clomp-and-stomp kunye UAlice I-ether ye-musty ibonisa i-osteoporosis ye Umatshini wethambo kunye nesifo sengqondo esixhalabisayo Umkhweli oMnyama , Ivumelekile ukuba idubule ibe sisifo esibulalayo.
Zombini ezi albhamu ziyingqinisiso yokuba ulinda u-cryptkeeper wangaphakathi uya esiba bukhali, edibanisa izixhobo ezingafaniyo kunye nokuchaneka okuyintlekele kunye nehlabathi elidala apho abantu abadumileyo bazalwa ngaphandle kwemizimba kunye ne-razors 'find' throat. Umculo ucacisa kwaye uzithembile kwi-spook-esile vibe ukuba icwecwe ngaphandle. Izixhobo zomculo zisebenza njenge-Rorsharchs yasemaphandleni (i-violin entle ye-'Fawn 'indenze ndabona ukuhlangana kweebugs- ngoku uzama!) Kunye nelizwi lokulinda lirekhodwe ngokufudumeleyo kwingoma nganye yeengoma, kunye ne-stand-up-bass ezinye zazo zibonakala ngathi zihambisa umoya we-balcony wokutsiba kwe-heroin-eshwabene uChet Baker.
Isigingci esithi 'Ukufa yindlala kwiBelly yeWhale' kuvakala ngathi kukuphambuka okubonakalayo kumqolo wakho. 'Ukuphulukana nezibuko' kuthimba isitshixo sokuguqa kwesinyithi kulwandle. 'I-Lullaby' yinto efanelekileyo yokungaqiniseki ngongcwalazi, kunye nekhathuni elibi 'iKommienezuspadt' licela umxube weklabhu. Yonke isilayidi esithi 'Ukuhamba kukaThixo kwishishini' sithathwa, kunye UBen-Hur ukuqeqesha amakhoboka ukumpompa itempo kwisantya sokudlathuka. Abo kuni baqala ukuva uTom Waits, njengoko ndenzayo-- Oko kukuthi, ngaphezulu kwelasagna endlwini katitshala ophakamileyo kunye nesifo solusu owayezama ukukulukuhla- baya kuyonwabela iingoma zothando ezi-albhamu. Bakhanyisa ukukhanya okoyikisayo kwindlela uninzi luthando-pop olwehlisa ngayo umhlaba kwisidingo sokutya somntu omnye omlingo, kwaye kangaphi ukutshintshwa kwebum: u-Alice UAlice izisa umlinganiswa wayo ophambili ngentlawulelo kunye netoni yokonakaliswa.
Kulungile, ukuze ufumane amazwi angenangqondo (kukho i-Ancient-Mariner-on-a-bender, i-post-pubescent Grover, iGolem-in-a-tux, kunye noGungan Boss Hogg). Kulungile, ke eli liqela lokuqala leengoma zokulinda apho izithako zibonakala ziqhelekile kangangokuba abaphulaphuli baziva benamandla ngokwaneleyo ukuba bazame ukuqagela iresiphi kwaye babhale eyabo Ingoma kaTom Waits (ndithetha nawe, uJoe Henry). Kulungile, ke kufuneka kunqunyanyiswe isigunyaziso kwisanga / kumculo wolonwabo. Kulungile, ke ezinye zezinto ezivuselelayo zokuphindaphinda Indoda ebengekho Ndiziva ndizivalele ngokwam kwaye andonelisekanga kangangexesha lokuqala owadibana nabo ngalo. Kulungile, ke umhleli wekopi ka-Anti kufuneka ahlangule imivundla evela kwiilebhu zovavanyo lwezithambiso ukucamagushela indlela ababekhuphela ngayo ngokungxolayo amazwi eencwadana. (Yintoni enika? Ndibheja u-Epitaph uneqela labafundi abafundela umsebenzi ophantsi abahlela isiphumlisi ngasinye kwiinowuthsi ze-Bad Religion.)
Okwangoku, kuya kufuneka ube neentloni xa uthenga i-Cursive, okanye i-Pedro iNgonyama, okanye i-CD ye-Ladytron, kwaye uzifumene. I-Synth-pooh kunye ne-guitar-flarney ayinayo i-jack kwi-calliopes, i-marimbas, i-celllains, i-cellos, kunye ne-tubas, konke oku kufakwe kwi-classical surreal yokupakisha ekhwaza 'Fuck the Grammys.' Ngelixa yonke inkcubeko ye-pop iyazala ngoopopu abaxakekileyo kunye neebhendi ezenziweyo ezithi zithandwe ngabom njengee-marionettes, i-Waits ikhonza i-fusion brittle fusion kwaye ngandlel 'ithile yaphula umthetho wokunciphisa ukubuya. Into embi ngale ndlela iyakhathaza, kwaye ayoyiki ukuba yimpazamo kwaye yamkele ukuba abantu ziinkawu nje eziqeqeshelwe ipaki efanayo. Yiza, wena Disney puds, lixesha lokuba u-Waits noDavid Lynch benze iKafka Ukuguqulwa kwemizimba njengomculo.
janelle monae uphononongo lwekhompyuter olungcolileyo
jack kunye nemeg emhlophe
joji ballads 1 uphononongo
drake ndicela undixolele
Ialbhamu yomlilo yeArcade